रिले अनशन बिथोल्ने सरकारी प्रयास असफल, झन् संगठित भए चिकित्सक – Health Post Nepal
रिले अनशन बिथोल्ने सरकारी प्रयास असफल, झन् संगठित भए चिकित्सक
२०७५ माघ १५ गते १४:०९
डा. केसी र विधेयकबारे भ्रम फैलाउनुको साटो समस्याको चाबी खोलिदिन प्रधानमन्त्रीलाई गगनको आग्रह
डा. केसीको समर्थनमा तात्यो सदन र सडक, मानवअधिकारकर्मी पक्राउ, डाक्टर पनि आन्दोलित
१६औँ आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि दबाब दिन चिकित्सक संघले सोमबारदेखि सुरु गरेको रिले अनशन बिथोल्न प्रयासका बाबजुद पनि दोस्रो दिन पनि देशभरका चिकित्सकले रिले अनशन जारी राखेका छन् । उपत्यकामा त्रिवि शिक्षण अस्पतालपरिसरमा अनशनस्थलमा स्वतन्त्र युवाका नाममा सोमबार बिथोल्ने प्रयास भएको थियो । मंगलबार पनि सोमबार रिले अनशनका लागि राखिएको टेन्ट रातारात गायब पारिएको नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एससिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले जानकारी थिए ।
प्रहरी वा प्रहरीकै संरक्षणमा बाहिरका व्यक्ति ल्याएर टेन्ट हटाइएको हुन सक्ने भनाइ चिकित्सकहरुको छ । टेन्ट हटाएपछि चिकित्सकहरुले खुला आकाशमुनि नै रिले अनशन थालेका छन् । प्रहरीले समेत चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलाई पटकपटक चेतावनीको भाषामा अनशन थाले कहिले पक्राउ गर्ने धम्की त कहिले झडप हुने त्रास देखाएको थियो । संघले त्यसका बाबजुद पनि विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । संघकाे आह्वानपछि देशभर विभिन्न शाखाहरुले समेत रिले अनशन सुरु गरेका छन् ।
संघका अनुसार पोखरा, धरान, विराटनगर, बीरगन्जमा दर्जनौँ चिकित्सक रिले अनशनमा बसेका छन् । यसैबीच संघले सोमबार नै विज्ञाप्ति जारी गरेर रिले अनशन बिथोल्ने प्रयास गरिए तत्कालल देशव्यापी स्वास्थ्यसंस्था हडतालमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । त्यसैगरी संघले आन्दोलनविरुद्ध भ्रम फैलाउने सदस्यमाथिसमेत कारबही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि सोमबारै त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत छुट्टाछुट्टै विज्ञाप्ति जारी गरेर रिले अनशन, विरोध, धर्नामा नलाग्न चेतावनी दिएको थियो । डा. केसीलाई गलाउने र अनशन तुहाउने सरकारी योजनाअनुसार चिकित्सकहरुमाझ विभाजन ल्याउन सरकारी चिकित्सक संघको नेतृत्वमा टोली परिचालन भएको बुझाइ संघ नेतृत्वको छ ।
डा. श्रेष्ठले सत्य र निष्ठाका लागि लडिरहेका एकजना डाक्टरको अनशन बिथोल्न सरकार नै लागिपरेको आरोप लगाए । ‘कहिले गुन्डा लगाउने, कहिले लोभ देखाएर संघकै सदस्यहरुलाई भड्काउने काम जारी छ,’ उनले भने, ‘राज्यको यस्तो हर्कतविरुद्ध चिकित्सकहरु झन् संगठित भएर लागेका छन् ।’ डा. श्रेष्ठले रिले अनशन बिथोलेर चिकित्सकहरु घर गएर सुत्छन् भन्ने भ्रममा नपर्न सरकारलाई चेतावनी दिए । ‘यिनीहरुलाई बेवास्ता गरेर वा भिजिलान्ते परिचालित गरेर सिध्याउन सकिन्छ भन्ने सपना कसैले नदेखे हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघले शक्ति देखाउन पर्दा आउने अवस्था निकै अप्रिय हुन्छ ।’
यसैगरी संघको रिले अनशनबाहेक पनि बिहीबारदेखि वीर, त्रिवि शिक्षण र धरानका चिकित्सकहरुले रिले अनशन जारी राखेका छन् ।
Tags: १६औँ अनशन